Myanmar Club (Singapore) Membership Application Form | Form Templates
Myanmar Club (Singapore) Membership Application Form
Shared by: mmt61
MYANMAR CLUB (Singapore) Membership Application
MEMBERSHIP FEES (အသင်းသားအဖြစ် ပေးသွင်းရန်)
ရာသက်ပန် အသင်းသားအဖြစ် ဝင်ကြေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀ နှင့် ရာသက်ပန်ကြေး ဒေါ်လာ ၃၀၀၊ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၃၅၀ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သာမန်အသင်းသားများအဖြစ် Singaporean(သို့) PR (သို့) EP Holderများ ဖြစ်ပါက ဝင်ကြေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၅၀)နှင့် နှစ်စဉ်ကြေး (၂၄) ဒေါ်လာ၊ စုစုပေါင်း (၇၄) ဒေါ်လာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားသော Pass holder များအနေဖြင့် ဝင်ကြေးဒေါ်လာ (၅၀) ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ နှစ်စဉ်ကြေး (၂၄) ဒေါ်လာသာပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
(အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်)
Membership Card ရိုက်နှိပ်ခအတွက် စင်္ကာပူ (၅)ဒေါ်လာ သီးခြားပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာကလပ်(စင်္ကာပူ)၏ ဘဏ်အကောင့် (UOB 146-301-836-2)သို့ အသင်းကြေးပေးသွင်းပြီးပါက ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်မြမြစိန် H.P- 82335682 သို့ လူကြီးမင်း၏ အမည်နှင့်တကွ ပေးသွင်းသော အသင်းကြေးငွေ ပမာဏကို message ပို့ပေးပါရန်။
Single Married Separated Divorced Widow / Widower
Singapore Pass *
Singaporean PR Long Stay EP SP WP Student Visit
S1234567Z, G1234567Z etc.
FaceBook account name (if you have for FB group communication purpose) *
Hobbies (ဝါသနာပါသည့် အကြောင်းအရာများ)
Interested Sub-Committee/s (ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုသော ဆပ်ကော်မတီများ)
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင် ပျံ့ပွားရေး ဆပ်ကော်မတီ စာပေ၊ ဗဟုသုတ၊ တတ်သိပညာ မြှင့်တင် ပျံ့ပွားရေး ဆပ်ကော်မတီ စင်္ကာပူရောက်မြန်မာမိသားစု၏ လူမှုအခက်အခဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ကောင်းမွန်သော လူ့ဘောင်ဘဝ မြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ မြန်မာ့အားကစားကဏ္ဍ ပံ့ပိုးကူညီရေး ဆပ်ကော်မတီ ရံပုံငွေရှာဖွေရေး ဆပ်ကော်မတီ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ
If you have any difficulties with online membership application, you are invited to come to Myanmar Club Office at Peninsula Plaza #05-42 from 13:00 to 19:00 hour on every Saturday.
အကယ်၍ အွန်လိုင်းအသင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိပါက မြန်မာကလပ် ရုံးခန်း (ပင်နီဆူလာပလာဇာ၊ ၅ထပ် အခန်းအမှတ် ၄၁) သို့ စနေနေ့များတွင် နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၇နာရီအထိ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
Membership Fees Paid (ပေးသွင်းထားသော အသင်းသားကြေး) *
Life (ရာသက်ပန်) 350S$ Singaporean / PR / EP Ordinary 74S$ + Member card 5$ (1st time) = 79$ Other Passes 24S$ + Member card 5$ (1st time) = 29$ Yearly Renewal fees 24S$ + new member cards 5$ = 29$6mth Fees 12S$ (not entitled for member card / အသင်းဝင်ကဒ်ရမည် မဟုတ်ပါ)
Declaration by applicant (လျှောက်ထားသူမှ ခံဝန်ချက်)
I declare that the above particulars given by me are true and correct and I agree to abide by the Constitution of the society.
အထက်ဖော်ပြပါ မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ပါသည်။ မိမိသည် မြန်မာကလပ်(စင်္ကာပူ) အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါမည်။
True & Correct ( ပေးပို့ထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ မှန်ကန်ပါသည်) I will abide by the Constitution of the Society (အသင်း၏ စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါမည်)
Bank Transfer Slip (ဘဏ်သို့ငွေသွင်းပြီးကြောင်း ဖြတ်ပိုင်း ဓါတ်ပုံ) to be uploaded *
ကျေးဇူးပြု၍ ငွေသွင်းပြီကြောင်း အထောက်အထား ဖြတ်ပိုင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံကို ပူးတွဲတင်ပြပေးပါရန်